ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်းကြောင့် ဒေသခံလူထုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ဖွယ်ရှိ | Ko Oo + Ma Thandar
« နှစ်သစ်အစောပိုင်း လများတွင် အအေးလှိုင်း ဖြတ်မည်
“မိုးညအိပ်မက်မြူ” အကယ်ဒမီ ရနိုင်ဟု ခန့်မှန်းနေ »
ဘသန့်	Thursday, 30 December 2010 17:25 – ဧရာဝတီ
ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း စတင်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် မြင်ကွင်း
ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို အပေါ်စီးမှ ဤအနေအထားအတိုင်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်
၎င်းအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချနဘူရီ – ထားဝယ် အဝေးပြေးလမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ၊ Transmission Line များပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်း ပြီးသွားပါက ဥရောပနှင့် အင်ဒိုချိုင်းနားကို ရေးလမ်းမှ ဖြတ်လမ်းအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်မည်ကို ပြသည့် မြေပုံ
ဧရာဝတီ သတင်းထောက် အောင်သက်ဝိုင်း ပါဝင်ရေးသားသည်။
This entry was posted on December 30, 2010 at 2:16 pm and is filed under ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.